Ity ny sary famantarana Apple miloko amin'ny fanasana hetsika iPhone 11 | Famoronana an-tserasera
Ao amin'ny fanontaniana Afaka 11 andro dia hanana ny teny fototra hanehoana ny iPhone XNUMX vaovao isika Ary eo am-pelatanantsika ity logo vaovao miloko vaovao ity izay nandefa ny vinavina tsy azo inoana indrindra.
Ireo an'ny Cupertino dia tokony ho eo an-tampony, satria manana mpanamboatra maro izy ireo izay manary tena aminyRaha mbola tsy nanao an'izany ianao, manao ahoana ny Samsung sy Huawei? Amin'ny fanasana no ahitanao ny kinova vaovao feno loko an'ny sary famantarana Apple.
Ao aminy no ahitanao ny andalana voasoratra "Ho an'ny fanavaozana ihany". Tsy vao sambany no nipoitra indray ny tombantombana momba ny fiverenan'ny Apple amin'ny sary famantarana ny avana. Ireo loko hita amin'ny sary famantarana ireo dia mety hanondro ny lokon'ny maodely tsirairay avy ihany, araka ny filazan'ny sasany avy amin'ny kaonty Twitter-ny.
Avy amin'ny zavatra fantatra momba ny iPhone 11 vaovao, afaka manantena modely telo isika: ny 11, ny 11 Pro ary ny 11 Pro Max. Fomba iray hanehoana modely izay nakan'izy ireo avy amin'ny marika roa hafa ary efa lasa zavatra namboarina isaky ny keynote isan-taona an'ireo telefaona ireo.
Marika iray izay tsy manana iray amin'ireo jeneraliny lehibe indrindra amin'ny laharany intsony izy, ary manantena izy fa amin'ity taona ity koa dia ho iray amin'ireo manintona indrindra amin'ny sary. Mety hanana fakan-tsary zoro malalaka telo tahaka ny hitantsika tao amin'ny Samsung Note10 + sy S10 + mahavariana ary ireo mitovy amin'ilay marika marika Huawei Huawei.
Mijanona amin'ny fanasana izahay marika Apple feno loko ary ilay sary famantarana izay kanto sy fahaiza-mamorona amin'ny famolavolana azy. Tsy hitsahatra ny hiteny ny maha-zava-dehibe ny marika ho an'ity telefaona marika amerikana ity ary mbola mitohy ho marika eo amin'ny tontolon'ny telefaona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Ity dia sary famantarana Apple vaovao mareva-doko iray vaovao, santatra ho an'ny keynote iPhone 11